Soomaali lagu waxyeeleeyay Mareykanka | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Soomaali lagu waxyeeleeyay Mareykanka
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku jira xabsiyada dalka Maraykanka ayaa loo geystey jirdil iyo falal handadaad la xiriira, sida ay sheegeen qaar ka tirsan Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi.
Soomaalidan dhibaatada loo geystay oo markii horeba si sharci daro ah ku galay Mareykanka, lana qorsheynayay in lagu soo celiyo Soomaaliya ayaa waxa ay ku xirnyihiin labo xabsi oo mid ka mid ah lagu magacaabo Galdeys, kuwaasi oo ku yaalla Magaalada Florida.
“Soomaalida waxa ay ku xirnaayeen labo xabsi oo ku yaala Florida, mid ka mid ah oo lagu magacaabo Galdeys ayaa waxaa ka dhacay tacadiyo, dhalinyaradaas waxa ay ka cabanayeen nadaafad daro, kadibna waxaa lagu buufiyay sunta indhaha, dhaawacyo badan ayaa loo geystay, markii ay arrintaasi dhacday garyaqaanadii ayaa gaaray maalintii Sabtida, kadib saacado badan ayaa lagu celiyay irida si dhaawacyada looga qariyo”. Ayuu yiri nin lagu magacaabo Maxamed oo u ololeeya xuquuqda Soomaalida.
Dhalinyaradan oo qaarkood lugaha ay ka jabeen, qaarkoodna ay soo gaareen dhaawacyo culus ayaa waxaa la geeyay isbitaal halkaasi ku yaalla oo lagu dabiibayo, si xaaladooda caafimaad loola tacaalo.
Garyaqaano u doodaya dadkan ayaa dacwad geeyay Maxkamada, taas oo soo saartay amar Afar qodob ka kooban oo ay ka mid yihiin in laga soo raro xabsigaas, lana galiyo mid laanta socdaalka ah iyo in dacwadan loo gudbiyo Wasaaradda Caddaalada oo ay soo diraan guddi baaris ah.